ရိုးရာပွဲတော်များ | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label ရိုးရာပွဲတော်များ. Show all posts
အင်္ဂလိပ် ရိုးရာ (Cheese) ချိစ်ဖမ်းပွဲကို ထောင်ပေါင်း များစွာသော ပွဲကြည့် သူတွေ လာရောက် ကြည့်ရှု ခဲ့ကြ ပါတယ်။
အဲ ဒီ ပွဲတော်ကို ဂလက် စတာရှဲ (Gloucestershire) ကျေးလက် aဒသက ကူးပါး aတာင်ကုန်း (Cooper’s Hill) မှာ မေလ ၂၉ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသား ပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင် ရရှိခဲ့ သူဟာ ဘရော့ဝါ့သ် (Brockworth) ရပ်ကွက်နေ အသက် ၂၉ နှစ် အရွယ် ခရစ်စ်အန်ဒါဆန် (Chris Anderson) ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး ပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင် ရရှိခဲ့ သူဟာလည်း ဘရော့ခ်ဝါ့သ် ရပ်ကွက်က အသက် ၁၈ နှစ် အရွယ် ကီဗီမော်ဂန် (Keavy Morgan) ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီပြိုင်ပွဲကို အစောဆုံး ရေးသား မှတ်တမ်း တင်ထား တာကို ၁၈၂၆ ခုနှစ်မှာ စတင်တွေ့ရှိ ရပေမယ့် တကယ်တမ်း အဲဒီထက် နှစ်ပေါင်း များစွာ ရှေးကျတဲ့ သမိုင်း ရှိတယ်လို့ ရိုက်တာ သတင်းမှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/209999
ကဏ္ဍ ရိုးရာပွဲတော်များ, ရုပ်/သံ, နိုင်ငံတကာသတင်း
မြန်မာပြည်မှာ တစ်ခုတည်းရှိတဲ့ ဘဲဥထုပွဲ စစ်ကိုင်းမြို့မှာ ကျင်းပနေ
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ တစ်ခုတည်း ရှိတဲ့ ရိုးရာ ဓလေ့ ဖြစ်တဲ့ ဘဲဥ ထုပွဲကို စစ်ကိုင်းမြို့၊ ဧမြဝတီ ရပ်မှာ ဒီကနေ့
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပနေပါတယ်။
ဘဲဥထုပွဲဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ စစ်ကိုင်းမြို့ ဇိနမာရ်အောင် လောကချမ်းသာ ကြေးဘုရား ဘုရားပွဲတော်မှာပဲ ရှိတဲ့ တစ်ခုတည်းသော ပွဲတော် ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာဘုရင် မင်းတုန်းမင်း လက်ထက်က အစေခံတပ် ကင်းသမားတွေ၊ လှေတော် သားတွေ ညဘက် အပျော် ဆော့ကစားရင်း အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ ရိုးရာပွဲတော် တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲတော်မှာ နှစ်စဉ် ဘဲဥပြုတ် ဈေးသည်ပေါင်း ၅၀ နီးပါး ရောင်းချပြီး တစ်သည်ကို ဘဲဥပြုတ် အလုံး ၅၀၀ နီးပါး ကုန်ကြတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ပွဲတော်မှာ ညပိုင်း ၆ နာရီကနေ ညနက်ပိုင်း ၁၂ နာရီကျော် နောက်တစ်နေ့ ကူးတဲ့ အထိ ရောင်းချ ကြ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘဲဥထုတဲ့ ပုံစံကတော့ အသည်ဆီက တစ်လုံးကို ၂၀၀ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူပြီး အကွဲ အနာအဆာ ပါမပါ စစ်ဆေး ပြီးနောက်မှာ လူနှစ်ယောက်က ထုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ယောက်ထုရာမှာ ဘဲဥကွဲတဲ့သူက အရှုံးဖြစ်ပါတယ်။
Originally published at - http://www.mcntv.biz/news/local-news/28276/
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, February 12, 2017 No comments:
ကဏ္ဍ ရိုးရာပွဲတော်များ, ပြည်တွင်းသတင်း
တရုတ် နှစ်သစ်ကူး အခါသမယတွင် အားလုံး ညီညွှတ်စွာဖြင့် ပါဝင် ပျော်ရွှင်ကြရန် ဖိတ်ခေါ်
၀န်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း တရုတ် နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော် ဖွင့်ပွဲ တွင် နှုတ်ခွန်းဆက် စကား ပြောကြားစဉ်
ရန်ကုန် ၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ် နှစ်သစ်ကူး အခါ သမယတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ တရုတ် တိုင်းရင်းသား အားလုံး အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ သူ/သား အားလုံး တစ်ညီ တစ်ညွှတ် တည်း ပူးပေါင်း ပါဝင်ပြီး ပျော်ရွှင် ကြစေရန် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ယနေ့ ဇန်န၀ါရီ ၂၈ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ၌ ပြု လုပ်သော သိုက်မြိုက် ဝေဆာ တရုတ် နှစ်သစ် မင်္ဂလာ တရုတ် နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော် ဖွင့်ပွဲ အခမ်း အနားတွင် နှစ်သစ် မင်္ဂလာ နှုတ်ခွန်းဆက် စကား
တွင် ထည့်သွင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
နှစ်သစ်ကို မင်္ဂလာ ရှိစွာ ကြိုဆိုနိုင်ကြရန် လိုအပ်ကြောင်း ၊ မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်ကို အားလုံး ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်း သကဲ့သို့အခြား တိုင်းရင်းသားများ အားလုံး၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးစံကို ညီညွှတ်စွာ ဖြင့် ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်း ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံဖွား တရုတ် လူမျိုးများ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးစံ များကို အသိ အမှတ် ပြုကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ထည့်သွင်း ပြော ကြားခဲ့သည်။
သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဟုန်လျန် တရုတ် နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော် ဖွင့်ပွဲ တွင် နှုတ်ခွန်းဆက် စကား ပြောကြားစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း၌ တရုတ် တိုင်းရင်းသားများ အားလုံး ညီညီ ညွှတ်ညွှတ်ဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံသူ/သား အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် တစ်ထောင့် တစ်နေရာမှ အင်တိုက် အားတိုက် ပါဝင် ကူညီကြရန် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက တိုက်တွန်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
“သိုက်မြိုက်ဝေဆာ တရုတ် နှစ်သစ်မင်္ဂလာ”တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော် ဖွင့်ပွဲ အခမ်း အနားတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဟုန်လျန်က တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးသည် ရွှေကြက်ဖ သဖွယ် ခေါင်းမော့ ရင်ကော့ကာ ရဲ့ဝင့်စွာဖြင့် ရှေ့ဆက် သွားနိုင်ပြီး နှစ်နိုင်ငံ
ပြည်သူ လူထု တို့ကို ပိုမို များပြားသည့် အကျိုး ကျေးဇူးများကို ရရှိ စေနိုင်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ၊ တရုတ် - မြန်မာ ဆွေမျိုး ပေါက်ဖော် ချစ်ကြည့်ရေး အဆက် မပြတ် တည်မြဲ တိုးတက်စေရန် ၄င်းက ဆန္ဒပြု ပြောကြား ခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ တရုတ် လူမျိုး အဖွဲ့ အစည်းများ ပူးပေါင်း၍ ခမ်းနားစွာဖြင့် လှပ ပျော်ရွှင်သည့် တရုတ် တန်း နှစ်ကူး ကြိုဆို ပွဲတော်ကို ကျင်းပနိုင်ခြင်းသည် သမိုင်းကြောင်း တစ်လျှောက် ပထမဆုံး ဖြစ်ပြီး စတင်ခြင်း တစ်ခုလည်း ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ
နိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဟုန်လျန်က ထည့်သွင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
NLD အဖွဲYချုပ် နာယကကြီး ဦးတင်ဦး တရုတ် နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော် ဖွင့်ပွဲ တွင် နှုတ်ခွန်းဆက် စကား ပြောကြားစဉ်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် နာယက ဦးတင်ဦးက တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေး အစဉ်အလာ သမိုင်းကြောင်း များအား ရှင်းလင်း
ပြောကြားပြီး ရှေ့ ဆက်၍ အစဉ် အလာကောင်းများ ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် နိုင်ငံ ကြီးပွား တိုးတက် သွားနိုင်မည် ဆိုသည်ကို ယခုပွဲကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် လေ့လာ သိရှိနိုင်ကြောင်း ၊ တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ဆက်လက် အဓွန့် ကြာရှည် ပါစေကြောင်း နှစ်သစ် မင်္ဂလာ နှုတ်ခွန်းဆက် စကား ပြောကြား ခဲ့သည်။
တရုတ် ကုန်သည်များ အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်ရွှေ တရုတ် နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော် ဖွင့်ပွဲ တွင် နှုတ်ခွန်းဆက် စကား ပြောကြားစဉ်
ရန်ကုန်မြို့ ၌ တရုတ်ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ပုံစံဖြင့် ကျင်းပသော တရုတ် နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်မှာ ရန်ကုန်မြို့ရှိ တရုတ် လူမျိုးတို့၏ နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း ပထမဆုံး ကျင်းပခွင့် ရရှိခဲ့သည့် ပွဲတော်ကြီး ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ တရုတ်ကုန်သည်များ အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်ရွှေက ပြောကြား ခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ ပွဲတော် ကျင်းပခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်လူမျိုး အသိုင်းအဝိုင်းတို့၏ တရုတ်ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ပျံ့ပွားရေး နှင့် တရုတ် အသိုင်းအဝိုင်း တို့မှ နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အပေါ် ယုံကြည်မှု တို့ကို ပေါ်လွှင် စေသည့် အပြင် မြန်မာနိုင်ငံဖွား တရုတ် လူမျိုး အသိုင်း အဝိုင်းတို့မှ မြန်မာ - တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည် ပူးပေါင်း ဆက်ဆံရေး နက်ရှိုင်းစွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အပေါ် ထားရှိသည့် မျှော်မှန်းချက် နှင့် ပေးဆပ်မှု တို့ကိုလည်း ထင်ရှားစေကြောင်း ထည့်သွင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
အခမ်း အနားသို့ တက်ရောက် လာသည့် ဧည့်သည်တော်များ
“သိုက်မြိုက်ဝေဆာ တရုတ် နှစ်သစ်မင်္ဂလာ”တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော် ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် တရုတ်ရိုးရာ ခြင်္သေ့ ၊ နဂါးများ လှည့်လည် ကပြခြင်း ၊ ဘင်ခရာ တီးဝိုင်းများဖြင့် လှည့်လည် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အပြင် တရုတ်ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာများအား လမ်း တစ်လျှောက် ပြသ ထားရာ ပြည်သူ များက စိတ်ပါ ၀င်စားစွာဖြင့် ပွဲတော်အား ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင် ပါဝင် ဆင်နွှဲကြသည်။
သံအမတ်ကြီး နှင့် တာဝန်ရှိ သူများအား နတ်မင်းကြီး များက ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့သစဉ်
၀န်ကြီးချုပ်၊ သံအမတ်ကြီး နှင့် တာဝန်ရှိ သူများအား ရိုးရာနဂါး နှင့် ခြင်္သေ့ များက ဂါရ၀ ပြုနေစဉ်
“သိုက်မြိုက်ဝေဆာ နှစ်သစ် မင်္ဂလာ” တရုတ် နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော် ဖွင့်ပွဲ အခမ်းနား
ဖွင့်ပွဲ အခမ်းနားမှ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တရုတ် သံအမတ်ကြီး
တရုတ် ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု မုဒ်ဦး
ရန်ကုန်တိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် သံအမတ်ကြီးတို့က စက်ခလုတ်နှိပ် ဖွင့်လှစ်နေစဉ်
ထို့ အတူ မဟာ ဗန္ဓုလလမ်း တစ်လျှောက်ရှိ ကုသိုလ်ဖြစ် အသင်း ၊ ယူနန် အသင်း ၊ ဖူကျန့် အသင်း ၊ ကွမ်တုံ အသင်း တို့ ၏ ပြခန်း များနှင့် ဖျော်
ဖြေရေး မဏ္ဍပ် များဖြင့် ဖျော်ဖြေ တင်ဆက် မှုများ အပြင် တရုတ်ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ပုံစံ ဖော်ညွှန်း ထားသည့် မုခ်ဦး များအား ရွှေတိဂုံ ဘုရားလမ်း ၊ ဗိုလ်ရွဲလမ်း ၊ လသာလမ်း ၊ စဉ့်အိုးတန်း လမ်း ၊ လမ်းမတော်လမ်း တစ်လျှောက် တည်ဆောက် ပြသ ထားသည်။
အားလုံးသော ဓါတ်ပုံများသည် (ဆင်ဟွာ) မှဖြစ်သည်။
Originally published at - http://xinhuamyanmar.com
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, January 29, 2017 No comments:
ကဏ္ဍ ရိုးရာပွဲတော်များ, ဓါတ်ပုံသတင်းများ, ပြည်တွင်းသတင်း
ခမီ တိုင်းရင်းသားများ နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းက ခမီ တိုင်းရင်းသား တို့ရဲ့ နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်ကို နှစ်စဉ် နတ်တော် လဆန်း ၁ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပ ခဲ့ပါတယ်။
တောင်ယာ လုပ်ငန်းခွင် သိမ်းပြီးလို့ နေရပ် aကျးရွာကို မိသားစု အားလုံး ပြန်လည် aရာက်ရှိတဲ့ အလုပ်အကိုင် အားလပ်ချိန်မှာ နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်ကို ကျင်းပကြတာပါ။
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှာတော့ ခမောင်းချောင်းအုပ်စု လောင်းချောင်းရွာမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အဝေးရောက်နေတဲ့ မိသားစု ဆွေမျိုး သားချင်းတွေ ပြန်လည် ဆုံဆည်းဖို့၊ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ကြစေဖို့၊ ဖူးစာဘက် ချစ်သူ အချင်းချင်း တွေ့ဆုံပြီး တိုင်ပင်နိုင်ကြဖို့၊ သက်ကြီး ဘိုးဘွားတွေ ဆီက ဆုတောင်းမေတ္တာနဲ့ သြ၀ါဒ စကားတွေ နာခံကြဖို့ အတွက် ရိုးရာဓလေ့ အတိုင်း ပြုလုပ်တာပါ။
ဒီအုပ်စုထဲမှာ အသက်အကြီးဆုံး အဘိုး၊ အဘွားတွေက ဦးဆောင်ရတယ်၊ သူတို့မှာတဲ့အတိုင်း လိုက်နာကြရတယ်လို့ လောင်းချောင်းရွာက ခမီတိုင်းရင်းသား ကိုမောင်ကျော်ခိုင်က ပြောပါတယ်။
ဒီပွဲတော်မှာ တောင်တန်းနေ ခမီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရိုးရာ တူရိယာတွေကို တီးခတ်ပြီး ကခုန်တာ၊ လှူဒါန်းတာ၊ သက်ကြီးပူဇော်တာ၊ ဧည့်ခံကျွေးမွေးတာ စတာတွေကို လုပ်ကြပါတယ်။
ခမီတိုင်းရင်းသား aတွဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက ဘူးသီးတောင်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ကျောက်တော်နဲ့ မြောက်ဦးမြို့နယ်တွေ ထဲက တောင်တန်းတွေမှာ နေထိုင် ကြပြီး တောင်ယာ လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင် ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်း၊ ဓာတ်ပုံ – ကိုအောင်
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/178573
ကဏ္ဍ ရိုးရာပွဲတော်များ, မြန်မာ့ပုံရိပ်များ
ထိုင်းနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတွင် ကျင်းပသည့် မျောက်အလှူပွဲ
ထိုင်းနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းက လွတ်ဘူရီ (Lopburi) ခရိုင်မှာ နှစ်စဉ် ကျင်းပနေကျ ဒေသခံ မျောက်တွေ အတွက် အလှူပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့က ကျင်းပ ခဲ့ပါတယ်။
လွတ်ဘူရီ ခရိုင်ဟာ မျောက်တွေ များပြားလွန်းတဲ့ အတွက် မျောက်ပြည်နယ် လို့လည်း ခေါ်ဆို ကြပြီး လာရောက် လည်ပတ် ကြည့်ရှုသူတွေ နဲ့လည်း စည်ကားတာပါ။
မျောက်တွေကြောင့် ဒီပြည်နယ်ကို ကမ္ဘာ့ခရီးသည်အများအပြား လာရောက်ကြတယ်။ ဒေသခံတွေအတွက် အကျိုးစီးပွားဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီး မျောက်တွေကို အလှူကြီးပေးတာပါ။
လတ်ဗီယားနိုင်ငံက လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် အမျိုးသမီးတဦးကတော့ သူ့ကို မနေ့က မျောက်တကောင် ကိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် မျောက်တွေကို နည်းနည်းသတိထားတာ ကောင်းတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လက ထိုင်းဘုရင်ကြီး နတ်ရွာစံသွားတဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းကာလ တနှစ် ကြေညာထားလို့ ဒီမျောက်အလှူပွဲကို စည်စည်ကားကား မကျင်းပဖြစ်ဘူးလို့ စီစဉ်သူတွေက ပြောပါတယ်။
ဒီမျောက်အလှူပွဲကို ကျင်းပလာတာလည်း ၂၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်လို့ ဒီနှစ်လည်း သင့်တင့်သလိုပဲ ကျင်းပဖြစ်တယ်။ အခုနှစ်က မနှစ်ကနဲ့စာရင် မျောက်ပိုများတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် သစ်သီးတွေကို ကုန်ကား ၃ စီးစာ အလှူအတန်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ အလှူပွဲကို စီစဉ်သူတဦးက ပြောပါတယ်။
လွတ်ဘူရီမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ မျောက်အကောင်ရေ ၃၀၀၀ လောက်ရှိပြီး ပြည်နယ်အတွင်း တခြားမြို့တွေမှာလည်း မျောက်အကောင်ရေ ၇၀၀၀ လောက်ရှိဦးမယ်လို့ အလှူပွဲကို စီစဉ်သူတွေက ပြောပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/177744
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, November 28, 2016 No comments:
အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဘုရား ဒေသစာရီကြွချီ (ရုပ်သံ)
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အင်းလေး ဒေသ ၂၁ ဌာနကို ဒေသစာရီ ကြွချီ ပူဇော်ခံတဲ့ ဖောင်တော်ဦး ရုပ်ရှင်တော်မြတ် တွေဟာ အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်မှာ ညောင်ရွှေမြို့ကို ရောက်ရှိ လာပါတယ်။
ဗုဒ္ဓရုပ် ပွားတော် တွေကို ကရဝိက် ဖောင်တော်နဲ့ ပင့်ဆောင်ပြီး အင်းလေးဒေသ ရွာတွေက ရိုးရာ ဆွဲလှေတွေနဲ့ ဒေသခံ တွေက တက်ညီ လက်ညီ စုပေါင်း လှော်ခတ်ကာ ပင့်ဆောင် ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ညောင်ရွှေမြို့မှာ ၃ ရက်တာ ကျိန်းစက်အပူဇော်ခံမယ့် ရုပ်ပွားတော်မြတ်တွေကို ထောင်ချီတဲ့ ဒေသခံတွေက ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။
ညောင်ရွှေမြို့ကို အင်းလေးဖောင်တော်ဦး ဘုရားတွေ ရောက်ရှိလာတဲ့နေ့မှာ နမ့်ကတ်ချောင်းအတွင်း အင်းသားရိုးရာ ရာကျော် လှေပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်း ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီဘုရားပွဲတော်အတွင်းမှာ ဘောလီဘောပြိုင်ပွဲ၊ ပိုက်ကျော်ခြင်း ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်း ထည့်သွင်း ကျင်းပလေ့ရှိသလို အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က လာရောက်ရောင်းချတဲ့ ဈေးဆိုင်တွေ၊ ရိုးရာ ဇာတ်သဘင်ပွဲတွေကိုလည်း ဆင်ယင်ကျင်းပလေ့ ရှိပါတယ်။
နှစ်စဉ် သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁ ရက်မှ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၃ ရက်အထိ ၁၈ ရက်တိုင်တိုင် အင်းလေးပတ်ဝန်းကျင်က ရွာတွေကို ဖောင်တောင်ဦး ရုပ်ရှင်တော်မြတ်တွေက ကြွချီ အပူဇော်ခံလေ့ရှိပါတယ်။
ရိုက်ကူး – အယ်ဝမ်
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, October 21, 2015 No comments:
ပန်းရွှေရင်းမာ လှိုင်စွာပျံ့သင်း တော်သလင်း
”တော်သလင်းဆီ၊ ကန်ရာသီ၊ ထွန်းချီဘဒြ၊ ရင်းမာလှိုင်မြဲ၊ ခိုင်လုံးဆွဲ၊ လှေပွဲသဘင်က။ ” (ကင်းဝန်မင်းကြီး)
မြန်မာ့ တဆယ့်နှစ်လမှာ ၆ လမြောက်က တော်သလင်းလ ဖြစ်ပါတယ်။ တော်သလင်း မြစ်တွင်း သင်ဖြူးခင်း ဆိုသလို မိုးလေ၀သ ကင်းစင် နေတဲ့လ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း လှေပြိုင်ပွဲတွေ ကျင်းပကြတာပါ။ ၀ါတွင်းကာလထဲမှာ ပါဝင်တဲ့လလည်း ဖြစ်သလို တော်သလင်းလပြည့်ဟာ ငါးပါးသီလ အခါတော်နေ့ (ဂရုဓမ္မ အခါတော်နေ့) ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယမြန်မာနိုင်ငံ (ကုန်းဘောင်မင်းဆက်)တည်ထောင်ခဲ့သူ အလောင်းဘုရား ဦးအောင်ဇေယျကို မွေးဖွားခဲ့တဲ့လ ဖြစ်သလို ခေတ်ဟောင်းကို တော်လှန်သော မြန်မာ မင်းသားကြီးတပါး ဖွားမြင်ခဲ့တဲ့ လလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယုန်ရထား အိမ် သီတလမှာတဲ့
မြန်မာ့ရုပ်စုံ စွယ်စုံကျမ်းအတွင်းမှာ တော်သလင်းလသည် မြန်မာလများတွင် ဆဋ္ဌမမြောက်လဟု ဖေါ်ပြထားသည်။ မိုးဥတုတွင် ပါဝင်သည်။ တော်သလင်းလကို ရှေးအခါက သစ် ဆင်း လ ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်ဆို၏။ သစ်ဆင်းလ ခေါ်ပုံ အကြောင်းကို ဝေါဟာရလိနတ္ထဒီပနီတွင် “ရေစီးအဟုန် မညံ့မဖျင်း မြစ်တွင်း သာသောကြောင့် သစ်ဖေါင်ဝါးဖေါင်အများ စုန်ဆင်းသည်။ တော်သလင်းကို မြစ်တွင်း သင်ဖြူးခင်းဟု ရှေးသူဟောင်းတို့ ဆိုရိုးရှိသည်နှင့် ထောက်ချင့်၍ ဆင်ခြင်” ဟူ၍ ဖော်ပြထားလေသည်။
ပုဂံကျောက်စာများတွင်မူ တော်သလင်းလကို င်္တသ္လင်ဟူ၍၄င်း၊ တာင်္သ္လင်ဟူ၍၄င်း ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရ၏။ ဗေဒင် အခေါ်အားဖြင့် တော်သလင်းလကို ကန်ရာသီဟုခေါ်သည်။ ထိုရာသီတွင် ဘဒြနက္ခတ်နှင့်လမင်း ယှဉ်ပြိုင်ကာ မွန်းတည့်၏။ ဘရဂုဏ္ဏီနက္ခတ်နှင့် နေမင်းယှဉ်သည်။ ရာသီရုပ်မှာ မိန်းမရုပ် နှစ်ရုပ်ဖြစ်၏။ ရာသီပန်းမှာ ရင်းမာပန်းတည်း။ ထိုလတွင် ထန်းများလည်းမှည့်သည်။
တော်သလင်းလတွင် လှိုင်းလေများ ငြိမ်သက်၍ မြစ်တွင်း ပျံ့ပျူးသောကြောင့် ရှေးမြန်မာမင်းများရှိစဉ်က လှေပြိုင်ပွဲများ ဆင်ယင်ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ ဤသည်ကိုရည်၍ ဦးအောင်ကြီး၏ အင်းဝမြို့ဘွဲ့ ၁၂ ရာသီလူးတား တော်သလင်းလဘွဲ့တွင်၊ “သာစွလေ၊ မြစ်ရေကမ်းပြည့်၊ ထန်းလည်းမှည့်၍၊ စည့်စည့်မိုဃ်းလ၊ ဗဒ္ဒရနှင့်၊ ပြည့်ဝအညီ၊ ကန်ရာသီဟု၊ အာနီမြခိုင်၊ ရင်းမာလှိုင်က၊ မွှေးကြိုင်ပျံ့သင်း၊ တော်သလင်းဝယ်၊ မြစ်တွင်းရတု၊ ပန်းလုသဘင်၊ သစ်ဆင်းယင်လျှက်၊ လက်သင်လှော်ကား၊ ရွှေသားစက်ကွင်း၊ လှေချင်းလှော်ပြိုင်၊ ခွင့်ရေးကိုင်၍” ဟူ၍ စပ်ဆိုထား၏။
ရွှေဗျိုင်းတာရာ ထွန်းပသော တော်သလင်းသမယတွင် နံနက်စက်နာရီ ၅ နာရီ မိနစ် ၅၀ ၌ နေထွက်၍၊ ညနေ စက်နာရီ ၆ နာရီ ၁၀ မိနစ်၌ နေ၀င်သည်။ မြန်မာနာရီိအားဖြင့် နေ့ ၃၂ နာရီ၊ ည ၂၈ နာရီ ရှိသည်။ ဤကိုရည်၍ ဦးယာ၏ ၁၂ ရာသီလူးတား တော်သလင်းလဘွဲ့၌၊ “တာရာရွှေဗျိုင်း၊ ဆီးတံ့ဆိုင်းသား၊ မရိုင်းနောက်က၊ အလျံပြ၍၊ ထွန်းပရောင်လူ၊ ရွှေဇမ္ဗူရာဇ်၊ ပုံမှန်စစ်လျက်၊ တက်သစ်စံရွှင်၊ ပင်္ဘဂရ၊ တောက်ပ၀င်းဝါ၊ နေစကြ်ာနှင့်၊ ဥတ္တရာမှီ၊ ဘရဂုဏ္ဏီဟု၊ ပြည့်ညီနက္ခတ်၊ လှည့်ပတ်အတူ၊ ဇမ္ဗူမဇ္စျေ၊ လယ်ဗွေရောက်ငြား၊ ဘ၀ါးဗီသ၊ တွက်ရမှန်ညီ၊ နာရီနေ့တွင်၊ သုံးဆယ်မြင်၍၊ နှစ်လျှင်စွန်းပါ၊ ညဉ့်ခါအဋ္ဌ၊ စမ္မသို့နေ ” ဟူ၍ စပ်ဆိုထား၏။
တော်သလင်းလတွင် ဗုဒ္ဓဟူးနှင့် သောကြာနေ့တို့မှာ ပြဿဒါးနေ့များ ဖြစ်ကြ၍၊ ကြာသပတေးနှင့် စနေနေ့များမှာ ရက်ရာဇာများ ဖြစ်ကြသည်။ တော်သလင်းလမှာ ရက်စုံကွယ်သောကြောင့် ရက်ပေါင်း ၃၀ ရှိသည်။
တော်သလင်းလရဲ့ ထူးခြားချက်တခုမှာ တော်သလင်းနေ ပုဇွန်သေ၊ တော်သလင်းမိုး ကန်သင်းကျိုး ဆိုသလို မိုးလေငြိမ်သော အရပ်တွေမှာ ပူလိုက်သမှ ပုဇွန်ငါးတွေတောင်
သေတတ်ကြပါတယ်။ မိုးကောင်းတဲ့ အခါတွေကြပြန်တော့လည်း လယ်ကန်သင်းဘောင်ရိုးတွေတောင် ကျိုးပေါက်တတ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တော်သလင်းလမှာ လှေပွဲသဘင်၊ ပန်းလုပွဲသဘင်၊ သစ်ဆင်းပွဲသဘင်နဲ့ မြစ်ယံပွဲသဘင်တွေကိုလဲ ကျင်းပကြကြောင်း မှတ်သားရပါတယ်။
တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော် (ကုန်းဘောင်မင်းဆက်) တည်ထောင်ခဲ့သူ အလောင်းဘုရား ဦးအောင်ဇေယျကို တော်သလင်းလမှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
ဦးအောင်ဇေယျကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၀၇၆ ခုနှစ် တော်သလင်း လပြည့်ကျော် ၁ ရက်၊ သောကြာနေ့ (၂၄၊ ၈ ၁၇၁၄) မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ မုဆိုးဘို ရွာကလေးကနေ ကုန်းဘောင်မင်းဆက်ကို တည်ထောင်ခဲ့သူပါ။ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ မုဆိုးဘို၊ ရတနာသိင်္ခ၊ ရန်ကြီးအောင်၊ ကုန်းဘောင်ခ ငါးမည်ရ ပြည်ရွှေဘိုရယ်လို့ ထင်ရှားခဲ့တာ အလောင်းမင်းတရားရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ ၁၁၂၂ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၁၂ ရက်မှာ ယိုးဒယားကို စစ်ချီရင်း မုတ္တမနယ်၊ ကင်းရွာမှာ နတ်ရွာစံခဲ့ပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းအရ ၁၁၁၃ ခု၊ တန်ခူးလဆန်း ၆ ရက်မှာ ဟံသာဝတီ(မွန်) ဘုရင် သိမ်းခဲ့လို့ အင်းဝ ပျက်သွားပါတယ်။ ဟံသာဝတီပါမင်း (မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိ)ကို ဟံသာဝတီအရောက် ဖမ်းခေါ်သွားခဲ့တယ်။
ဒီအချိန်မှာ အလောင်းဘုရားဟာ မုဆိုးဘို ထန်းလုံးတပ်ကာပြီး ပုန်ကန်လိုက်တယ်။ ၁၁၁၄ ခု ကဆုန်လဆန်း ၁၂ ရက် (၁၇၅၂ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၄ ရက် တနင်္လာနေ့)ကစပြီး ဟံသာဝတီ ဘုရင်ဟာ အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ အလောင်းဘုရားရဲ့ မုဆိုးဘို ထန်းလုံးတပ်ကို ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
အလောင်းဘုရား ဖက်က ၁၂ ရက်ကြာအောင် ခုခံထားပြီး ရန်သူတွေကို ထန်းလုံးတပ်ထဲက တန်ပြန်ထိုးစစ် ထွက်တိုက်ခဲ့လို့ အနိုင်ရလိုက်ပါတယ်။ ဒီလို ထွက်တိုက်တဲ့နေ့ဟာ ၁၁၁၄ ခုနှစ် ကဆုန်လဆုတ် ၈ ရက် (၁၇၅၂ ခုနှစ် မေလ ၅ ရက် သောကြာနေ့)။
ကုန်းဘောင်ခေတ် အမရပူရ ဒုတိယမြို့တည် သာယာဝတီမင်း (၁၈၃၇-၁၈၄၆) နဲ့ သီရိသုစန္ဒာမိဘုရားတို့ကနေ သတိုးမင်းရဲကျော်ထင် ဘွဲ့ခံ ကနောင်မင်းသားကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၁၈ ခုနှစ်၊ တော်သလင်း လပြည့်ကျော် ၂ ရက် တနင်္ဂနွေမှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ အကိုတော် ဖြစ်သူမှာ ပဉ္စမသင်္ဂါယနာတင် မင်းတုန်းမင်းဖြစ်ပါတယ်။
မင်းတုန်း ကနောင် ညီအကိုပေါင်းပြီး ပုန်ကန်ကြရာ ၁၈၅၃ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်မှာ ပုဂံမင်းကို အောင်ပွဲရခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီကစ အိမ်ရှေ့စံ ကနောင်မင်း ဖြစ်လာတာပါ။ အိမ်ရှေ့စံ ဆိုပေမဲ့ သူဟာ သြဇာတိက္ကမ ကြီးမားပြီး တန်ခိုးအာဏာလည်း ထက်လှပေတယ်။ ပြည့်အရေးအရာ စီမံခန့်ခွဲရာမှာလည်း ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တယ်။
ဒါကြောင့် ကနောင်မင်းသား ဘုရင်ဖြစ်လာမှာ မလိုလားကြတဲ့ မြင်ကွန်း မြင်းခုံတိုင် မင်းသားတို့က လုပ်ကြံတာကြောင့် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၁၈ ခု၊ ဒုတိယ ၀ါဆိုလပြည့်ကျော် ၇ ရက် (၁၈၊ ၆၊ ၁၈၆၆) မှာ တိမ်းပါးခဲ့ရပါတယ်။
ကနောင်ဟာ သံတမန်ဆက်ဆံရေးလဲ ကျွမ်းကျင်တယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေဆီ ပညာတော်သင်တွေလည်း လွှတ်သလို လက်နက်စက်ရုံကြီး ၂ ရုံကိုလည်း တည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ မဲနယ်စက်၊ စပါးစက်၊ လွှစက် စသဖြင့် စက်ရုံတွေ တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်ကို စက်မှုနိုင်ငံတည်ထောင်လိုတယ်။ ဒီလို ခေတ်မီဖို့ ကြိုးစားနေတုန်း သူ ကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာ လှေလှော်ရင်း တက်ကျိုး ဆိုသလို မြန်မာပြည် နစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့တာပါပဲ။
တော်သလင်းလပြည့် ငါးပါးသီလနေ့ (ဂရုဓမ္မ အခါတော်နေ့)
တော်သလင်းလပြည့်နေ့ဟာ ငါးပါးသီလ အခါတော်နေ့ (ဂရုဓမ္မ အခါတော်နေ့)ပါ။ မြတ်စွာဘုရားရှင်က (ဂရုဓမ္မဇတ်တော်ကြီး) ကို တော်သလင်းလပြည့်နေ့မှာ ဟောခဲ့တာမို့ တော်သလင်းလပြည့်နေ့ဟာ ဂရုဓမ္မ အခါတော်နေ့ ဖြစ်လာရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဂရုဓမ္မ ဆိုတာကတော့ ငါးပါးသီလကို စောင့်ထိန်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတ်တာ၊ ခိုးတာ၊ ကာမေသု၊ မုသာဝါဒနဲ့ သေရည် အရက် ၅ မျိုးရှောင်တာဟာ ငါးပါးသီလထိန်းတာပါပဲ။
ငါးပါးသီလဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း စောင့်ထိန်း ရမဲ့ အခြေခံတရား ဓမ္ဓဖြစ်လို့ ဂရုဓမ္ဓ သီလလို့လည်းခေါ်တာပါ။ ငါးပါးသီလ ပျက်ယွင်းသူဟာ ခြေပြတ်သူနဲ့ တူပြီး ခြေမရှိသူဟာ လိုရာကို မသွားနိုင်ပါ။ ငါးပါးသီလ မရှိသူဟာ ခေါင်းမပါသူ၊ မျက်မမြင် နားမကြားသူနဲ့တူပြီး ရှင်လျှက် သေသူနှင့် မခြားပါ။ ငါးပါးသီလ မလုံလျှင် သေတဲ့အခါ အပ္ပါယ်ငရဲကို ကျပါမယ်။
ငါးပါးသီလ လုံသူဟာ သေပြီးတဲ့အခါ ကောင်းရာသုဂတိ နိဗ္ဗာန်တိုင် ရောက်မယ်လို့ ရှင်တော်ဘုရားက ဟောခဲ့ပါတယ်။ ဂရုဓမ္မဇတ်တော်အတွင်း ဗုဒ္ဓက ငါးပါးသီလကို မင်း (အစိုးရ)က အစ ပြည့်တန်ဆာအထိ စောင့်ထိန်းမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည် နိုင်ငံတွေဟာ ကပ်ကြီး ၃ ပါးက လွတ်ကင်းပြီး မိုးလေ၀သ မှန်ကန်မယ်လို့ ဟောထားခဲ့ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ကမ္ဘာတ၀ှန်း( မြန်မာပြည်အပါအ၀င်)မှာ ရေကြီး တောင်ပြို မိုးခေါင် ရေရှား စတဲ့ ရာသီဥတုတွေ ဖောက်ပြန် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး ကပ်ဘေးတွေ၊ ရောဂါပေါင်းစုံ
ကပ်ဘေးတွေအပြင် ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ် ညှဉ်းဆဲ စစ်ပွဲစတဲ့ သတ်ဖြတ်နှိပ်စက်မှု ကပ်ဘေးမျိုးစုံ ကြုံနေရချိန် ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီလို ဆိုးဝါးတဲ့ ကပ်ဘေးကြီးတွေက လွတ်မြောက်ရေး၊ ဥတုရာသီတွေ သဘာဝကျကျ ဖြစ်စေရေးအတွက် တော်သလင်းလပြည့် (ဂရုဓမ္မ အခါတော်နေ့) မှာ ဂရုဓမ္မ သီလ (ခေါ်) ငါးပါးသီလမြတ်တွေကို အောက်ခြေ ပြည်သူကအစ အစိုးရမင်းတွေအထိ အားလုံးက စောင့်ထိန်းနိုင်ကြစေရေး နှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။ ။
၁။ မြန်မာ့ဆယ့်နှစ်လအကြောင်း (မောင်ထင်)
၂။ ဆယ့်နှစ်လရာသီ ပန်းများနှင့်ပွဲတော်များ (ခင်မျိုးချစ်၊ ဂျူနီယာဝင်း)
၃။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်၊ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလပြည့်နေ့ထုတ် စံတော်ချိန် သတင်းစာပါ တော်သလင်း လပြည့် သို့မဟုတ် ဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့ ဆောင်းပါး (ဦးကြိုင်မြင့်-ဆူးလေ)
၄။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း (စာပေဗိမာန်)
၅။ တတိယမြန်မာနိူင်ငံကိုတည်ထောင်ခဲ့သူ အလောင်းမင်းတရားဦးအောင်ဇေယျ (တင်ထွေး)
Original link - http://burmese.dvb.no/archives/113839
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, September 28, 2015 No comments:
ရပ်နားထားရသည့် ဖောင်တော်ဦး ဘုရား လှေပြိုင်ပွဲ ပြန်လည်စတင်
မိတ္ထီလာမြို့လယ်က ၁၃၂ ကြိမ်မြောက် ဖောင်တော်ဦး ပွဲနဲ့ လှေပြိုင်ပွဲကို တော်သလင်း လဆန်း ၈ ရက်နေ့ ကနေ ၁၅ ရက်နေ့ထိ ကျင်းပ ပါတယ်။ ဒီနေ့ဟာ ပွဲတော် နောက်ဆုံး ရက်ဖြစ်လို့ နယ်ပေါင်းစုံက လာရောက် ကြပါတယ်။
ထူးခြားတာက ဖောင်တော်ဦးဘုရားပွဲတော်ကို မကျင်းပဖြစ်တာ ၂ နှစ်ကြာခဲ့ပါပြီ။၂၀၁၃ ခုနစ် မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့က မိတ္တီလာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေးအဓိကရုန်းကြောင့် လုံခြုံရေးစိတ်မချရတဲ့အတွက် မကျင်းပဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ဒီနှစ်မှာ ပြန်လည်ကျင်းပတဲ့ပွဲတော်မှာ ယခင်လှေပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ မတူဘဲ အကြီးတန်းရော အငယ်တန်းပါ အသင်းပေါင်း ၁၈ သင်းနဲ့ တပေါင်းတည်း ယှဉ်ပြိုင်စေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ – တာရာ
Original link - http://burmese.dvb.no/archives/113816
ပင်ပန်းသမျှ ရွှင်လန်း သွားစေသော မော်တင်စွန်း ဘုရားပွဲ
ဆံတော်ရှင် မြတ်မော်တင် ဘုရား
ကျနော့် မမ ပုသိမ်သူ၊ ချောပုံ ယဉ်ပုံ လှပုံ တမူ၊ အများနဲ့ မတူ အလှဘွဲ့ယူ…. အစချီပြီး “မော်တင်စွန်း ဘုရားပွဲ လိုက်ခဲ့ပါ ခေါ်သူ…” ဆိုသော စာသား များနှင့် ဖွဲ့သီ ထားသည့် အဆိုတော် သန်းထွန်းလေး ၏ မမ ပုသိမ်သူ သီချင်းကို ဖွင့်လျက် ပုသိမ်မြို့မှ ထွက်ခွာလာ သော နှစ်ထပ်ခွဲ သင်္ဘောကြီးက ငပုတော မြို့နယ် ရှိ မြစ်ကြောင်း အတွင်း၌ တရွေ့ရွေ့ ခုတ်မောင်း နေသည်။
သာသနာ့ အလံငယ် လေးများ တလူလူ လွှင့်ထူ ထားသည့် သင်္ဘော ကြီးက ငပုတော မြို့နယ်၊ ဟိုင်းကြီးကျွန်း မြို့နယ် ခွဲတွင် တည်ရှိ သည့် မော်တင်စွန်း ဘုရား ဆီသို့ ဦးတည် ခုတ်မောင်း နေခြင်း ဖြစ်ပြီး သင်္ဘောပေါ်၌ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ လာရောက် ကြသည့် ဘုရားဖူး ခရီးသည်များ လိုက်ပါ လာခဲ့ကြသည်။
“ကျနော်တို့ မိသားစုက နှစ်တိုင်းမော်တင်ဘုရားပွဲကို လာဖြစ်တယ်။ ဒီနှစ်နဲ့ဆို ၄ နှစ်မြောက်ပေါ့။ မော်တင်စွန်းဘုရားပွဲက တနှစ် လာပြီးတာနဲ့ နှစ်တိုင်း ဘုရားပွဲအချိန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ မလာဘဲကို မနေနိုင်ဘူး”ဟု ရန်ကုန်မြို့မှ လာရောက်သည့် ကိုကျော်စည်သူက ပြောပြသည်။
ဘုရား ပွဲတော်တွင် ခင်းထားသည့် ဈေးတန်းများ
မြန်မာပြည်၏ တန်ခိုးကြီးဘုရားတဆူဖြစ်ပြီး လူသိထင်ရှားသည့် မြတ်မော်တင်စွန်း ဘုရားပွဲတော်ကို နှစ်စဉ် တပေါင်း လဆန်း ၁ ရက်နေ့(ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်)မှ တပေါင်းလပြည့်နေ့(မတ် ၄ ရက်)အထိ ၁၅ ရက် ကျင်းပခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်တွင် တပို့တွဲ လပြည့်ကျော် ၁ ရက်နေ့(ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်)မှ တပေါင်းလပြည့်နေ့(မတ် ၄ ရက်)အထိ ရက်ပေါင်း ၃၀ ကျင်းပခဲ့သည်။
ဘုရားပွဲတော် စတင်သည်နှင့် လျှပ်ပြေးရေယာဉ်များ၊ နှစ်ထပ်ခွဲ သင်္ဘောကြီးများဖြင့် ပုသိမ်မြို့ဆိပ်ကမ်းမှ ဟိုင်းကြီးကျွန်း မြို့နယ်ခွဲ ခမောက်မော် ကျေးရွာအထိ တိုက်ရိုက်ပြေးဆွဲပေးသည်။ အိပ်စင်များ ပါဝင်ပြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ မွမ်းမံ ပြင်ဆင်ထားသည့် သင်္ဘောကြီးများက ဘုရားဖူးခရီးသည်များအတွက် သွားလာရေး အဆင်ပြေစေသကဲ့သို့ လမ်းတလျှောက်၌လည်း မော်တင်စွန်းဘုရားပွဲအကြောင်း သီဆိုထားသည့် သီချင်းများ ဖွင့်ပေးထားသည့်အတွက် မော်တင်စွန်း ဘုရားဖူးခရီးစဉ်အတွင်း သင်္ဘောစီးရသည်က ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်။
ခမောက်မော် ကျေးရွာအနီးရှိ ပင်လယ်ကမ်းစပ်၌ သင်္ဘောများ ခရီးဆုံးအဖြစ် ဆိုက်ကပ်သည်နှင့် မော်တင်ဘုရားနှင့် ခမောက်မော် ရွာအကြား ပြေးဆွဲသည့်လိုင်းကားများက ဘုရားဖူး ခရီးသည်များကို သူ့ထက်ငါ အလုအယက် ခေါ်ယူကြသည်။ ခရီးသည်ပြည့် သည် နှင့် မောင်းထွက်ကြပြီး ရေကျချိန်ဆိုလျှင် သောင်ပြင်ကမ်းစပ် အတိုင်းမောင်းကာ၊ ရေတက်ချိန် ဆိုလျှင်တော့ ခမောက်မော်၊ ကံချိုင်စသည့် ရွာတွင်းလမ်းများမှ မောင်းလေ့ရှိကြသည်။
မော်တင်စွန်း ဘုရားပွဲ သင်္ဘောဆိပ်
ရေကျချိန် သောင်ပြင်လမ်းအတိုင်း မောင်းသည့်အခါတွင် အခက်အခဲမဖြစ်သော်လည်း ရေတက်ချိန် ရွာတွင်းလမ်းများ အတိုင်း မောင်းသည့်အခါတွင် လမ်းပိုင်းနေရာ တော်တော်များများ ပျက်စီးနေပြီး လမ်းကြမ်းသည့်အတွက် ခမောက်မော် – မော်တင်လမ်း ၃ မိုင် ခရီးအား ဘုရားဖူးဧည့်သည်များ ခက်ခဲပင်ပန်းစွာ သွားလာနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ လိုင်းကားမစီးလို၍ ဆိုင်ကယ် တက္ကစီဖြင့် သွားကြသူများလည်း ရှိသည်။ မော်တင်စွန်းဘုရားပွဲသို့ လာရောက်၍ ပြေးဆွဲသည့် လိုင်းကားအစီးပေါင်း ၁၈၀ ကျော်ရှိပြီး ဆိုင် ကယ် တက္ကစီအစီးရေ ၁၀၀၀ ကျော် ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ဘုရားဖူး ဧည့်သည်တွေများတဲ့အချိန်၊ လူစည်ကားတဲ့အချိန်တွေမှာ ကားတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေက မဆင်မခြင် မောင်းတော့ သေဆုံး ဒဏ်ရာရတာတွေ ရှိတယ်။ တချို့ကလည်း ကမ်းခြေမှာ ဆိုင်ကယ်မမောင်းတတ်တော့ မှောက်ကြတာတွေ ရှိတယ်။ ဒီနှစ်လည်း ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်တာ လူတယောက် သေသွားတယ်”ဟု လိုင်းကား စပယ်ယာတဦးက ပြောပြသည်။
ရပ်ဝေးမှ လာရောက်ကြသည့် ဘုရားဖူးဧည့်သည်များ ညအိပ်တည်းခိုရန် ဘုရားပွဲဈေးတန်း အတွင်း၌ တည်းခိုဆောင်များ အသီး သီး ဖွင့်လှစ်ထားပြီး လူစည်ကားရက်ဖြစ်သည့် တပေါင်းလဆန်း ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက်များတွင် အခန်းလွတ်ဟူ၍ မရှိသလောက်ဖြစ် အောင် ဘုရားဖူးဧည့်သည်များ လာရောက်ကြသည်။
အခန်းခ ဈေးနှုန်းများမှာလည်း အဆိုပါအချိန်တွင် ၂ ဆ၊ ၃ ဆ မြင့်တက်သွားလေ့ရှိသည်။
ဖုန်းလိုင်းမှာလည်း GSM၊ တယ်လီနော၊ အော်ရီဒူးမည်သည့်ဖုန်းမှ လိုင်းမမိချေ။ ၅ သိန်းတန်ဖုန်းဟု အလွယ်ခေါ်ကြသည့် ၀၉ ၄၉ ဖြင့်စသော CDMA 450 ဖုန်းများသာ လိုင်းမိသဖြင့် ဖုန်းဖြင့်၊ အင်တာနက်ဖြင့် အလုပ်လုပ်သူများ မော်တင်စွန်း ဘုရားပွဲရောက်ချိန် တွင် အခက်တွေ့ကြသည်။ လမ်းဘေးဖုန်း – PCO လည်း မရှိသဖြင့် ဘုရားဖူးဧည့်သည်များမှာ ဘုရားပွဲဈေးတန်းမှ ဈေးသည်တို့၏ ဖုန်းများကို ငှားရမ်၍ ပြောဆို ဆက်သွယ်ကြရသည်။
ပွဲကာလ ဘုရား ဆီသို့ တိုက်ရိုက် ပြေးဆွဲသည့် ရွှေစင်ကြယ် သင်္ဘော
မော်တင်စွန်း ဘုရားပွဲသို့ လာရောက်သူအားလုံး ညည်းညူကြသည့် ကိစ္စကတော့ ရေချို မရရှိသည့် ပြဿနာဖြစ်သည်။ တည်းခိုဆောင်များကလည်း ညအိပ်ဖို့သာ တာဝန်ယူပြီး ရေချိုအသုံးပြုမှုအတွက် တည်းခိုသူက ရေ ၁ ဇလားလျှင် ၅၀၀ ကျပ်၊ မျက်နှာသစ်၊ ခြေလက်ဆေးလျှင် ၂၀၀ ကျပ်၊ သန့်စင်ခန်းအသုံးပြုလျှင် ၁၀၀ ကျပ် နှုန်းဖြင့် ငွေ သပ်သပ်ပေးရသည်။
ငပုတောမြို့နယ်အတွင်းမှ ဘုရားဖူးလာသည့် ဒေသခံများကတော့ ဖျာများ၊ စောင်များ ယူဆောင်လာကြပြီး ဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ်၌ အသီးသီး စုရုံးအိပ်စက်ကြသည်။ မော်တင်စွန်းသို့ ကားဖြင့်လာရောက်သူ တချို့ကလည်း ကမ်းခြေ သဲသောင်ပြင်ပေါ်၌ ကားထိုး ရပ်ကာ ကားပေါ်၌ပင်အိပ်စက်ကြသည်။
ဘုရားဖူးခရီးစဉ်အတွင်း အခက်အခဲများ၊ အဆင်မပြေမှုများ ရှိစေကာမူ မော်တင်စွန်းဘုရားကို ဖူးမြော်ပြီးနောက် ပင်ပန်းမှုများ၊ အခက်အခဲများ အားလုံး မေ့လျော့ပြေပျောက်သွားသည်ဟု ပဲခူးတိုင်း၊ နတ္တလင်းမြို့မှ ဘုရားဖူး လာရောက်သည့် ဒေါ်စိန်တင်က ပြောပြသည်။
“ဘုရားဖူးရတာ အဆင်မပြေမှုလေးတွေတော့ ရှိတာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပဲ ခက်ခဲပင်ပန်းတာတွေ ရှိပေမယ့် ဘုရားကုန်း တော် ပေါ်တက်ပြီး ဝတ်ပြုပြီးတာနဲ့ မောသမျှ၊ ပင်ပန်းသမျှတွေ ပြေပျောက် သွားတယ်”ဟု သူက ဆိုသည်။
မော်တင်စွန်းဘုရားမှာ ပင်လယ်ကမ်းခြေအနီးရှိ တောင်အစွန်း ကုန်းမြင့်ပေါ်တွင် တည်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ရှေးအခါက ယင်းကုန်း တော် ကို သရန တောင်ဟုခေါ်ဆိုကြောင်း ဘုရားသမိုင်းမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ ခုနှစ်တွင် တပုဿနှင့် ဘလိက္ကကုန်သည်ညီနောင် ၂ ဦးမှာ မဇ္ဈိမဒေသ (အိန္ဒိယနိုင်ငံ) သို့ ဆန်များ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရန် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူသည့် ဂေါတမမြတ်ဗုဒ္ဓကို ပထမဦးဆုံး ဖူးတွေ့ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အား ဖူးတွေ့ရစဉ် နောက်နောင်တွင် ဘုရားရှင်ကိုယ်စား အလေးအမြတ်ထား ကိုးကွယ်ရန် ပေးသနားတော် မူပါဟု တောင်းခံခဲ့ရာ မြတ်ဗုဒ္ဓက ကုန်သည်ညီနောင်အား ဆံတော် ၈ ဆူ ပေးသနားတော် မူခဲ့ပြီး ယင်းဆံတော်များအား လှေဖြင့်တင် ဆောင် ၍ ရွက်လွှင့်လာခဲ့ရာ ကုသိမနဂရ (ခေါ်) ပုသိမ်ဒေသ တောင်ဘက်ပိုင်း နဂရာဇ်မှော် (ခေါ်) မော်တင်စွန်း အငူသို့ ရောက်ရှိကာ ညအိပ်ရပ်နားစဉ် နဂါးတို့၏ဘုရင် ဇေယျသေန နဂါးမင်းက လူအသွင်ဖန်ဆင်း၍ ဆံတော် ၂ ဆူကို ခိုးယူပင့်ဆောင် ထားခဲ့ သည်။
ဇေယျသေန နဂါးမင်းက ယင်းဆံတော်များကို သရနတောင် (ခေါ်) မော်တင်စွန်းအငူ၌ ဌာပနာ၍ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ ခုနှစ် ဝါဆိုလပြည့်နေတွင် ဘုရားစေတီအဖြစ် တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်ဟု ဘုရားသမိုင်းမှတ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။ နောက် နောင်တွင် သီရိဓမ္မာသောကမင်း၊ အလောင်းစည်သူမင်းတို့က ဘုရားဒါယကာအဖြစ် ခံယူပြီး ပြုပြင် တည်ဆောက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဘုရားသမိုင်းတွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
“မော်တင်စွန်းဘုရားရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ဆွမ်းကိုဦးအောင် မကပ်နိုင်ဘူး။ မနက် ၄ နာရီ ဘုရားကို ဆွမ်းကပ်မယ် ပြင်ထားရင် ဆွမ်းပွဲတခုခုက ဘုရားမှာ ကပ်ပြီးသား ဖြစ်နေပြီ။ ဘုရားဖူး ဘယ်လောက်များများ ဘုရားရင်ပြင်တော်က ပြည့်သွားတယ်လို့ မရှိဘူး။ ဘာမုန်တိုင်း တိုက်ပါစေ ဘုရားကို ထိခိုက်တယ် မရှိဘူး။ နာဂစ် မုန်တိုင်း တိုက်တုန်းကတောင် ဘုရားမှာ ကြီးကြီးမားမား ပျက်စီးတာ မရှိခဲ့ဘူး”ဟု ဂေါပကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်ငွေက ပြောပြသည်။
နှစ်စဉ် မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှ ဘုရားဖူး ဧည့်သည်ပေါင်း ၁ သိန်းကျော် လာရောက်လည်ပတ်လေ့ ရှိပြီး ဘုရားသို့ လှူဒါန်းငွေမှာ နှစ်စဉ် ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကျော် ရှိကြောင်း သိရသည်။
နဂါးမင်းတည်သော ဘုရားဟု အစွဲပြုခေါ်ဆိုကြသည့်နည်းတူ နှစ်စဉ် ဘုရားပွဲတော်ကျင်းပသည့် တပေါင်းလတွင် နဂါးများ လာရောက်ဖူးမြော်ကြသည်ဟု ဒေသခံများက အစဉ်အဆက် ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ နတ်နဂါးတို့အပေါ် ယုံကြည်မှုရှိသူ ဘုရားဖူး ဧည့်သည်များကလည်း မော်တင်စွန်းဘုရားဖူးမြော်ပြီးနောက် ဖောင်တော်ဆိပ် စေတီတော်အနီး၌ နဂါးစာကျွေး၍ အလိုရှိရာဆုများ တောင်းနေကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
ငှက်ပျောတုံးလေးများကို ဖောင်သဖွယ်ပြုလုပ်၍ ဖောင်ပေါ်တွင် ထီး၊ တံခွန်၊ အောင်သပြေပန်း၊ သာသနာ့အလံ၊ နွားနို့အိုးနှင့် တခြား လိုအပ်သောပစ္စည်းများ တင်ဆောင်ကာ ပင်လယ်အတွင်းသို့ မျှောပြီး နဂါးစာကျွေးကြခြင်း ဖြစ်သည်။
“လှူဒါန်းတဲ့လူတွေက နဂါးမင်းကို အစာကျွေးပြီး လိုရာဆုတောင်းကြတာပေါ့။ ကျနော်တို့ကတော့ လိုအပ်တာတွေ ကူညီပေးပါတယ်။ နဂါးမင်းကို ပင့်ဖိတ်ပေးတယ်။ ဝိုင်းဝန်း ဆုတောင်းပေးတယ်။ နဂါးစာ ကျွေးခြင်းအားဖြင့် ဇေယျသေန နဂါးမင်းက သူတို့အပေါ် စောင့်ရှောက်တယ်၊ ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်လေ”ဟု မော်တင်စွန်း ဘုရားပွဲတွင် နဂါးစာကျွေးသည့် ဖောင်များ ပြုလုပ်ရောင်းချသည့် ကိုဇော်ထိုက်က ပြောပြသည်။
ဘုရားဖူး ဧည့်သည်များထဲတွင် လူကြီးပိုင်းက နဂါးစာကျွေးနေချိုန်တွင် လူငယ်များက အလောင်းစည်သူမင်း တည်ထားခဲ့သည့် ဖောင်တော်ဆိပ်စေတီတော် ပတ်ပတ်လည်ရှိ တမျှော်တခေါ် သန္တာကျောက်တန်းများပေါ် လျှောက်သွားရင်း အလှဓာတ်ပုံ ရိုက်သူ ရိုက်၊ ပင်လယ်ရေလှိုင်း ရှုခင်းများ ကြည့်သူကြည့်နှင့် ပျော်ရွှင်နေကြသည်။
မော်တင်စွန်း ဘုရားအနီးတဝိုက်၌ ကုသိုလ်ယူစရာ၊ လေ့လာစရာများ လုပ်ဆောင် ပြီးသွားချိန်တွင် ဘုရားဖူး ဧည့်သည်များမှာ မော်တင်မှ ၇ မိုင်ခန့်ဝေးသည့် ငွေတောင်ရွာအနီးမှ ကမ်းခြေသို့ သွားရောက်ပြီး ပင်လယ်ရေကူးရင်း စိတ်လက် အပန်းဖြေကြသည်။
ပင်လယ်ရေကြည်၍ သောင်ပြင်လည်း ကျယ်ဝန်းသည့် ငွေတောင်ကမ်းခြေက ချောင်းသာနှင့် ခပ်ဆင်ဆင် တူသည်။ ငွေတောင်တွင် ဟိုတယ်တခုသာရှိပြီး ဘုရားဖူး ခရီးသည်အများစုကတော့ သောင်ပြင်ပေါ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ရေချိုချိုးသော အခန်းများတွင် ပစ္စည်းများအပ်ကာ ပင်လယ်ရေကူးလိုက်၊ အုန်းစိမ်းရည် သောက်လိုက်ဖြင့် ပင်ပန်းသမျှကို ဖြေဖျောက်ကြသည်။
“ရေကူးရတာ အရမ်း ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ချောင်းသာရောက်နေသလို ခံစားရတယ်။ မော်တင်စွန်းလာတာက ဘုရားလည်း ဖူးရတယ်၊ ရေလည်းကူးရတယ်။ ကုသိုလ်လည်းရ၊ ပျော်လည်းပျော်ရတာပေါ့။ ဒီနှစ်မှ ကျနော်လည်း ရောက်ဖူးတာ။ အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတော့ နောင်နှစ်တွေလည်း လာဦးမှာပါ”ဟု ရန်ကုန်မြို့မှ လာရောက် လည်ပတ်သည့် ကိုအောင်ဌေးက ပြောပြသည်။
ဘုရားဖူး ဧည့်သည်များက ပျော်နေကြသော်လည်း ယခုနှစ် မော်တင်စွန်းဘုရားပွဲတော်တွင် ဈေးလာရောင်းကြသည့် ဈေးသည်များ၊ ခမောက်မှော် – မော်တင်ပြေးဆွဲသည့် လိုင်းကားသမားများနှင့် ဆိုင်ကယ်တက္ကစီသမားများက မပျော်နိုင်ကြ။
“ဘုရားပွဲက ရက် ၃၀ ဆိုတော့ စရိတ်ထောင်းတယ်လေ။ အစောပိုင်းရက်တွေက လူမလာကြဘူး။ ဘုရားပွဲတလ ကျင်းပတာကို မသိကြတာရယ်၊ ကလေးတွေစာမေးပွဲတွေနဲ့ တိုက်နေလို့လည်း ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ လူမစည်တော့ ဈေးမရောင်းရတဲ့ အခါကျတော့ ဒီမှာက ရေဖိုးနဲ့ စားစရိတ်က နေ့တိုင်းကုန်တယ်။ အဲဒီတော့ ဒီနှစ်က စာရင်း ပြန်ချုပ် လိုက်ရင် မမြတ်တဲ့အပြင် အရှုံးတောင် ပြ တယ်”ဟု ချောင်းသာရွာမှ မော်တင်ဘုရားပွဲသို့ မုန့်ဟင်းခါး၊ ခေါက်ဆွဲ လာရောင်းသည့် ဈေးသည်အမျိုးသမီးတဦးက ပြောသည်။
အရှုံးပေါ်သော်လည်း မော်တင် ဘုရားပွဲရာသီရောက်တိုင်း မလာဘဲမနေနိုင်သဖြင့် လာမည့်နှစ်ဘုရားပွဲချိန်တွင် လာရောက် ဈေးရောင်းဦးမည်သာ ဖြစ်ကြောင်း သူက ဆိုသည်။
ရှုံးသည်ဖြစ်စေ၊ မြတ်သည်ဖြစ်စေ မော်တင်စွန်းဘုရားပွဲက ထောင်သောင်းချီသည့် ဧရာဝတီတိုင်းသားများ အတွက် ကုသိုလ်လည်း ရ၊ ဝမ်းလည်းဝသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို နှစ်စဉ် ဖော်ထုတ် ဖန်တီးပေးခဲ့သည်သာ ဖြစ်သည်။
တပေါင်းလပြည့်နေ့ဖြစ်သည့် မတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် မော်တင်စွန်း ဘုရားပွဲ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက် ၃ ရက် အကြာတွင် ဘုရားပွဲကျင်းပခဲ့သည့် သောင်ခုံပေါ်သို့ ပင်လယ်ရေများတက်လာခဲ့ပြီး လူတို့စွန့်ပစ်ခဲ့သည့် အမှိုက်သရိုက်များကို ရေလှိုင်းများက ပင်လယ်ထဲ သို့ ဆွဲယူသွားခဲ့ကြသည်။
ဤသည်က နဂါးတို့က ရေလှိုင်းများဖန်တီး၍ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင်း ကုသိုလ်ယူခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံများက ယုံကြည်နေ ကြ သည်။ သိပ္ပံနည်းကျကျ အဖြေကိုသာ ဖော်ထုတ်လက်ခံလိုသူများ အတွက်တော့ ဤကိစ္စက ရယ်မောစရာ တခုလိုသာ ဖြစ်နေပေ လိမ့်မည်။
မည်သို့ဆိုစေ မြန်မာပြည် အနောက်တောင်ဘက်စွန်းရှိ မော်တင်စွန်းဘုရားပွဲကတော့ ဒဏ္ဍာရီဆန်သည့် ယုံကြည် သက်ဝင်မှုများ၊ လှပဆန်းကြယ်မှုများ၊ ပျော်ရွှင်လှိုက်မောဖွယ်ရာများဖြင့် မြန်မာပြည်သားတို့အား နှစ်စဉ် ဆွဲဆောင်နေပါ လိမ့်ဦးမည်။
ဓာတ်ပုံ အားလုံး – ဆလိုင်းသန့်စင် / ဧရာဝတီ
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, March 25, 2015 1 comment:
ကဏ္ဍ ရိုးရာပွဲတော်များ, သတင်း-ဆောင်းပါး
ကထိန် အကြောင်း သိကောင်းစရာ
အချိန်အခါနှင့် အညီ ကထိန် ရာသီ ရောက်လေတိုင်း ကထိန်ပွဲ များသို့ အရောက် သွား ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း မိတ်ဆွေ
များနှင့် စားသောက် ရယ်မော စကားပြော၍သာ ပြန်ခဲ့တာများပါသည်။ အချိန်မရ၍ ဟူသော အကြောင်းပြချက်နှင့် ကထိန် တရားကို ကောင်းစွာ မနာယူခဲ့သဖြင့် ကထိန်အကြောင်းကို ကောင်းစွာ မသိခဲ့။
ထို့ကြောင့် ကထိန်အကြောင်း တစေ့ တစောင်း သိလို၍ နီးစပ်ရာ ဆရာတော်အား မေးမြန်း လျှောက်ထားရာ -
☺မေး။ ။ အရှင်ဘုရား .. ကထိန်ဆိုတာ ဘာလဲ ဘုရာ့၊ တန်ဆောင်မုန်း လမှာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ကခုန်ပွဲတွေ ကျင်းပတဲ့ အခါ ဆီမီး
ထိန်ထိန် ထွန်းတာကို ကထိန်လို့ ခေါ်တာလား။
☺ဖြေ။ ။ အေး .. ကောင်းသကွာ၊ ဒကာလေး မေးလိုက် တော့မှပဲ ကထိန် ရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ပျက်စီး တော့ တယ်။ ကထိန် ဆိုတဲ့ အ
ဓိပ္ပာယ်က ဒီလို ဒကာလေးရ ကထိန်ခင်းပြီးတဲ့ အခါ ကထိန်ခင်းတဲ့ ကျောင်းက ပထမဝါသီတင်းသုံးကြတဲ့ ရဟန်းတွေအား
လုံး ကထိန်ရဲ့ အကျိုးငါးမျိုး ရကြတယ်။ အဲဒီ အကျိုး ငါးမျိုး ရရှိမှုကို ခိုင်မြဲစေတာကို ကထိန်လို့ ခေါ်တယ်။
☺မေး။ ။ ကထိန် ခင်းတယ် ဆိုတာကကော ဘာလဲဘုရာ့။ သင်္ကန်းတွေ စောင်တွေ တိုင်ကပ်နာရီတွေ တခြား အသုံးအဆောင်
ပစ္စည်းတွေကို ပဒေသာပင် သီးပြီး ခင်းကျင်းပြသ ထားတာကို ကထိန် ခင်းတယ်လို့ ခေါ်တာလား။
☺ဖြေ။ ။ ကထိန်ခင်းတယ် ဆိုတာ သံဃာတွေ လုပ်ရတဲ့ အလုပ် ဒကာလေးရ။
ကထိန်အကျိုး ငါးမျိုးကို ကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာ ဖြန့်ခင်းထားသလို ပြန့်နှံ့အောင် လုပ်တာကို တနည်းအားဖြင့် ဝိနည်းစည်း
ကမ်းအရ စီစဉ်တာကို ကထိန်ခင်း တယ်လို့ ခေါ်တယ်။ ဒကာ ဒကာမ တွေက ကထိန် ခင်းလို့ မရဘူး ဒကာလေးရ ။ ကထိန်
သင်္ကန်းနဲ့ ကထိန်ပွဲ ဖြစ်အောင် လှူဒါန်း ထောက်ပံ့ တာကိုပဲ လုပ်နိုင် တယ်။ အဲဒီလို သင်္ကန်း စတဲ့ လှူဖွယ် ပစ္စည်း တွေ လှူပြီး ကထိန်ပွဲ ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေး တာကိုပဲ ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ ဘယ်ကျောင်းမှာ ဒီနှစ် ကထိန်ခင်းတယ်လို့ ပြောတတ်
ကြတယ်။ တကယ်တော့ ဒကာ ဒကာမတွေက ကထိန်ခင်းလို့ မရဘူး။ သံဃာတော် တွေကပဲ ကထိန်ခင်းလို့ ရတယ်။
သံဃာတော် တွေ ကထိန် ခင်းနိုင် အောင်လို့ ဒကာ ဒကာမတွေက သင်္ကန်းလှူဒါန်း ရတာမို့ ဒကာ ဒကာမတွေ ကထိန်ခင်း
တယ်လို့လဲ ပရိယာယ် အနေနဲ့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် “ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ ဘယ်ကျောင်းမှာ ဒီနှစ် ကထိန်ခင်းတယ်”
လို့ ပြောတဲ့ စကားဟာ တနည်းအားဖြင့် သင့်လျော်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
☺မေး။ ။ အရှင်ဘုရား ညပ်မကြီး ညပ်မကြီးဆိုတာကကော ဘာလဲဘုရာ့။ ပဒေသာပင်မှာ ကပ်,ညှပ်ထားတဲ့ အဖိုးတန်ဆုံးအ
ရာကို ညပ်မကြီးလို့ ခေါ်တာလား။
☺ဖြေ။ ။ ညပ်မကြီးဆိုတာ ဒကာလေးပြောသလို မဟုတ်ဘူး။ အသံထွက်တူပေမယ့် သတ်ပုံ စာလုံးပေါင်း မတူ၊ အဓိပ္ပာယ်မ
တူတဲ့ စကားလုံး ဝေါဟာရတမျိုးဖြစ်နေတယ် ဒကာလေးရ။ ကထိန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စကားလုံးက “ဉတ်”ဖြစ်တယ်။ “ဉတ္တိ”
ဆိုတဲ့ ပါဠိစကားက ဆင်းသက်လာတယ်။ “ဉတ္တိဒုတိယကမ္မဝါစာ” ရွတ်ဖတ်ပြီး ကထိန်ခင်းထိုက်တဲ့ ရဟန်းကို ကထိန်သ
င်္ကန်းပေးရတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီ ကထိန် သင်္ကန်းကို “ဉတ်သင်္ကန်း”လို့ ခေါ်ရတယ်။ ဉတ်သင်္ကန်း ဟာ ရဟန်းတွေ အသုံး
ပြုနေကြ ခါးဝတ် သင်္ကန်း၊ အပေါ်ရုံ သင်္ကန်း၊ ခြုံသင်္ကန်း (နှစ်ထပ် သင်္ကန်းကြီး) ဆိုတဲ့ သင်္ကန်း သုံးထည် ထဲက တစ်ထည်
☺မေး။ ။ အရှင်ဘုရား ပြောရင်း ပြောရင်းနဲ့ ရှုပ်သွားပြန်ပြီ။ “ဉတ္တိဒုတိယကမ္မဝါစာ” ရွတ်ဖတ်ပြီး သင်္ကန်းပေးရတယ်ဆိုတာ
မှာ ဉတ်ဆိုတာက ဘာလဲဘုရာ့။ နောက်ပြီး ကမ္မဝါစာဆိုတာကြီးကကော။
☺ဖြေ။ ။ ဉတ်ဆိုတာက ‘သံဃာတော်ဟာ ယခု သံဃာ့ကိစ္စကို ပြုကြပါမယ်’လို့ သံဃာတော်တွေကို သိစေဖို့ ပြောကြားတာပဲ။ ကမ္မဝါစာဆိုတာကတော့ ‘သံဃာက ဒီကိစ္စကို ဒီလိုပြုလုပ်ပါတယ်၊ သဘောတူကြပါသလား၊ သဘောမတူရင် ပြောကြပါ၊
သဘောတူရင် ငြိမ်ငြိမ်နေတော်မူပါ’လို့ အဆိုပြု တင်ပြတဲ့စကားရပ်ပဲ။ နားလည်အောင် ပြောရရင်တော့ သံဃာနဲ့ပတ်သက်
တဲ့ ကိစ္စတခုခုကို ပြုတဲ့အခါ သဘောတူ,မတူ မေးမြန်းပြီး သံဃာရဲ့ အတည်ပြုချက်ရဖို့ မေးမြန်းပြောဆိုတဲ့ စကားကို ကမ္မဝါ
☺မေး။ ။ ဘာကြောင့် ကထိန်ခင်းရတာလဲဘုရာ့။
☺ဖြေ။ ။ ရဟန်းတော်တွေ လိုက်နာဖို့ ဘုရားရှင်ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းချက် (ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်) အချို့ကို အချိန်ကာလ အ
တိုင်းအတာတခုအတွင်း မလိုက်နာဘဲ ကင်းလွတ်ခွင့်ရအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် ကထိန်ခင်းရတာပဲ ဒကာလေးရ။
☺မေး။ ။ ဘယ်လို စည်းကမ်းချက်တွေက ကင်းလွတ်ခွင့်ရတာလဲ ဘုရာ့။
☺ဖြေ။ ။ ရဟန်းတပါးဟာ အိမ်တအိမ်က ဆွမ်းစားပင့်ထားပြီး ဖြစ်ပါလျက်နဲ့ အဲဒီအိမ်မှာ ဆွမ်းမစားမီဖြစ်စေ၊ ဆွမ်းစားပြီးမှ ဖြစ်
စေ တခြား အိမ်ကို ကိစ္စ တခု ခုကြောင့် သွားချင်ရင် ရဟန်း တပါး ပါးကို ပြောပြီးမှ သွားရတယ်။ မပြောဘဲ သွားရင် အာပတ်
သင့်စေလို့ ဘုရားရှင်က စည်းကမ်း ချမှတ်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် မကျန်းမာတဲ့ အခါ သင်္ကန်းလှူတဲ့အခါ သင်္ကန်းချုပ်တဲ့အခါ
မျိုးတွေမှာတော့ ဘယ်သူ့မှ မပြောဘဲ သွားနိုင်တယ်။ ကထိန် ခင်းထားတဲ့ ရဟန်းကတော့ ကထိန် ခင်းပြီးတဲ့ အချိန်က စပြီး
တပေါင်း လပြည့်နေ့ အထိ အဲဒီ စည်းကမ်းကို မလိုက်နာဘဲ နေနိုင် တယ်။ မြို့ထဲရွာထဲ သွားတဲ့ အခါ မှာလဲ ဘယ်သူ့ ကိုမှ
ရဟန်းတော်တွေမှာ ခါးဝတ်(သင်းပိုင်) အပေါ်ရုံ(ဧကသီ) ခြုံထည်(သင်္ကန်းကြီး)ဆိုတဲ့ သင်္ကန်းသုံးထည်ကို ဝတ်ရုံ သုံးဆောင်
ပုံ နှစ်မျိုးရှိတယ် ဒကာလေးရ ဒီသင်္ကန်းသုံးထည်ကို သာမန်အဝတ်သင်္ကန်းအနေနဲ့ သဘောထားပြီးတော့ ဝတ်ရုံသုံးဆောင်
တာနဲ့ အဲဒီသင်္ကန်းသုံးထည်ကိုပဲ သူ့အမျိုးအစားအလိုက် စိတ်ထဲမှာ စွဲစွဲမြဲမြဲ သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ ရိုရိုသေသေ ဝတ်ရုံသုံး
တကယ်လို့ ရဟန်းတပါးဟာ သင်္ကန်းသုံးထည်ကို သူ့အမျိုး အစား အလိုက် စိတ်ထဲမှာ စွဲစွဲမြဲမြဲ သတ်မှတ် ထားပြီးတော့ ရိုရို
သေသေ ဝတ်ရုံသုံးဆောင်ရင် အဲဒီသင်္ကန်းသုံးထည်စလုံးနဲ့ အရုဏ်တက်ချိန်အထိ အတူ ရှိနေရမယ်။ ဝတ်ရင်လဲ ဝတ်ထား၊ ဝတ်မထားရင်လဲ သူ့ရဲ့နှစ်တောင့်ထွာ အကွာအဝေး အတွင်းမှာ ရှိနေစေရတယ်။ အဲဒီလို မဟုတ်ဘူး ဆိုရင် အပြစ် ရှိတယ်။
ကထိန်ခင်းတဲ့ ရဟန်းတော်မှာတော့ ဒီစည်းကမ်းချက်ကို တပေါင်းလပြည့်နေ့အထိ မလိုက်နာဘဲ နေလို့ရတယ်။ ဥပမာ-ခရီး
သွားရင် သင်္ကန်းတထည်ထည်ကို ယူသွားစရာ မလိုတော့လို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ခရီးသွားနိုင်တယ်။
“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်အိမ်ကို ထမင်းစားကြွပါဘုရား၊ ထမင်းဘုဉ်းပေးကြွပါဘုရား၊ မုန့်စားကြွပါဘုရား”လို့ လူသုံးစကား
နဲ့ (သာသနာသုံးစကားနဲ့ မဟုတ်ဘဲ) ဆွမ်းစားပင့်ရင် လေးပါးထက်များတဲ့ ရဟန်းတွေဟာ အတူတူ တချိန်ထဲ ကြွသွားပြီး အဲ
ဒီဆွမ်းကို မဘုဉ်းပေး ကောင်း ဘူး။ အပြစ် ဖြစ် တယ်။ လေးပါး အောက် နည်းတဲ့ ရဟန်းတွေ ကတော့ အတူတူ တချိန်ထဲ ကြွ
သွားပြီး အဲဒီဆွမ်းကို ဘုဉ်းပေးနိုင်တယ်။ ကထိန်ခင်းတဲ့ ရဟန်းတော်မှာတော့ ဒီစည်းကမ်းချက်ကို တပေါင်းလပြည့်နေ့ အထိ
မှတ်ထား ဒကာလေးရ .. ဘုန်းကြီးတွေကို ဆွမ်းစားပင့်ရင် ‘မုန့်ဟင်းခါးစား ကြွပါဘုရား၊ ခေါက်ဆွဲစား ကြွပါဘုရား၊ ထမင်းစား
ကြွပါဘုရား’လို့ မပင့်ရဘူး။ ‘အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်အိမ်ကို ဆွမ်းဘုဉ်းပေးကြွပါဘုရား၊ မုန့်ဆွမ်း ဘုဉ်းပေးကြွပါဘုရား’လို့
☺မေး။ ။ အရှင်ဘုရား .. ဒီလိုဆို နိုင်ငံခြားသားတွေက ဆွမ်းစားပင့်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဘုရာ့။ သူတို့က ဆွမ်းဆိုတဲ့ စကားလုံး
ကို သုံးမှ မသုံးတတ်ပဲ။
☺ဖြေ။ ။ တော်တော် ကပ်ကပ်သပ်သပ်နိုင်တဲ့ ဒကာလေးပဲ။ ဆွမ်းဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မသုံးတတ်ရင် breakfast နဲ့ lunch ဆိုတဲ့
စကားလုံးကိုပဲ သုံးပြီး ဆွမ်းစားပင့်ပေါ့ ဒကာလေးရ။ Pizza, Fried noodle, KFC စတဲ့ စကားလုံးတွေကို မသုံးနဲ့ပေါ့။
☺မေး။ ။ ကပ်သပ်တယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူးဘုရား။ စဉ်းစားမိလို့ မေးတာပါ။ နောက်ကော ဘယ်လို စည်းကမ်းချက်တွေက ကင်း
☺ဖြေ။ ။ ရဟန်းတော်တွေဟာ သင်္ကန်းကိုးထည်ထဲက တထည်ထည်ရလာရင် အဲဒီသင်္ကန်းကို (၁၀)ရက်မပြည့်မီ အဓိဋ္ဌာန်တင်
ရင်လဲတင်၊ ဝိကပ္ပာပြုရင်လဲပြု တခုခုလုပ်ပြီး သိမ်းထားရတယ်။ မလုပ်ဘဲ သိမ်းထားရင် အဲဒီသင်္ကန်းကို မသုံးဆောင်ကောင်း
တော့ဘူး။ ရလာတဲ့ သင်္ကန်းကို ဆယ်ရက် အတွင်းမှာ အဓိဋ္ဌာန် မတင် ဝိကပ္ပနာမပြုဘဲ သိမ်းထားမိတဲ့ အတွက် အပြစ်ဖြစ်ပြီး
အဲဒီ သင်္ကန်းကိုလဲ စွန့်လွှတ် လိုက်ရ တော့တယ်။ ကထိန်ခင်းတဲ့ရဟန်းတော်မှာတော့ ဒီစည်းကမ်းချက်ကို တပေါင်းလပြည့်
နေ့အထိ မလိုက်နာဘဲ နေလို့ရတယ်။
☺မေး။ ။ အဓိဋ္ဌာန်တင်တယ်၊ ဝိကပ္ပနာပြုတယ်ဆိုတာက ဘယ်လိုလုပ်တာလဲ ဘုရာ့။
☺ဖြေ။ ။ အဓိဋ္ဌာန်တင်တယ်ဆိုတာ သင်္ကန်းသုံးထည်ကို သူ့အမျိုးအစားအလိုက် စိတ်ထဲမှာ စွဲစွဲမြဲမြဲ သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ ရို
ရိုသေသေ ဝတ်ရုံ သုံးဆောင် မယ်လို့ စွဲမြဲစွာ တည်ဆောက် တာပဲ။ ဝိကပ္ပနာ ပြုတယ် ဆိုတာ ကတော့ ရလာတဲ့ သင်္ကန်းကို
ကိုယ့် ပစ္စည်းဆိုတဲ့ အမှတ်သညာ ကင်းအောင် ပြုလုပ်ပြီး အခြား ရဟန်း တပါးပါးအား ခေတ္တအပ်နှံ ထားတာပါပဲ။
☺မေး။ ။ စောစောက ပြောတဲ့ အထဲမှာ သင်္ကန်း ကိုးထည်ဆိုတာ ပါတယ်။ အဲဒီ သင်္ကန်း ကိုးထည်ဆိုတာ ဘာပါလဲဘုရာ့။
☺ဖြေ။ ။ သင်္ကန်း ကိုးထည် ဆိုတာ ခါးဝတ်သင်္ကန်း၊ အပေါ်ရုံသင်္ကန်း၊ နှစ်ထပ် သင်္ကန်းကြီး၊ အိပ်ယာခင်း၊ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ၊
သင်္ကန်း မချုပ်ရသေးတဲ့ အဝတ်အထည် အတိုအစ၊ ထိုင်စရာ အခင်း၊ မိုးရေခံ ရေလဲသင်္ကန်းနဲ့ အမာလွှမ်း သင်္ကန်းတွေ
☺မေး။ ။ ကထိန်ခင်းတဲ့အတွက် နောက်ထပ် ဘယ်လို အကျိုးရနိုင်သေးသလဲ ဘုရာ့။
☺ဖြေ။ ။ ကထိန်ခင်းတဲ့ရဟန်းဟာ ကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာ ကထိန်ခင်းတဲ့ လက စပြီး တပေါင်းလပြည့်နေ့အထိ ငါးလအတွင်း
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အများဆိုင်သင်္ကန်းစတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဝေစုအနေနဲ့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရတယ်။
မေး။ ။ ဒီလိုဆို ကထိန်ပွဲမှာ လှူတဲ့ သင်္ကန်းတွေ ဘုန်းဘုန်းတို့ အားလုံး ပိုင်ဆိုင် တာပေါ့နော်။ သင်္ကန်းလှူတဲ့ ဒကာ ဒကာမ၏
တွေကလဲ အများကြီး သင်္ကန်းကပ်တဲ့အခါ သင်္ကန်းမလောက်လို့ ကပ်ပြီးသား သင်္ကန်းတွေကိုပဲ ထပ်ထပ်ပြီးကပ်နေရတယ်။ သင်္ကန်းတွေတောင် Recylce ဖြစ်နေပြီ။
☺ဖြေ။ ။ ဒကာလေးပြောသလို သင်္ကန်းလှူတာ Recycle ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ဟုတ်သလိုလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီသင်္ကန်းတွေအ
တွက် လှူတဲ့ အလှူငွေတွေနဲ့ ရေ, မီး, ဓာတ်ငွေ့, တယ်လီဖုန်းခ စတဲ့ ကျောင်းရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကို အသုံးပြုရတယ်။ ရေ,
မီး, ဓာတ်ငွေ့ တယ်လီဖုန်းစတာတွေကို သံဃာတော်တွေပဲ အသုံးပြုကြတာမို့ ဒီအလှူငွေ တွေကို သံဃာတော် လှူတာနဲ့ အ
တူတူပါပဲ ဒကာလေးရ။ နောက်ပြီး ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲ ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲ (ဗုဒ္ဓနေ့)၊ နှစ်သစ်
ကူး ဆုဆောင်း မေတ္တာပို့သပွဲ စတဲ့ ကျောင်းက ပြုလုပ်တဲ့ပွဲတွေက အလှူခံရတဲ့ ငွေတွေနဲ့ သာသနာပြု လုပ်ငန်းကြီးတွေကို
လုပ်နေတာ အေဘီဘီအေ အသင်းအနေနဲ့ နယူးယောက်၊ နယူးဂျာစီပြည်နယ်မှာ ကျောင်းတွေ တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပြီး နယူး
ဂျာစီမှာ စေတီတော်ကြီး တစ်ဆူကိုလည်း တည်ထားနိုင် ခဲ့တယ်။ ရိပ်သာ အဆောက်အဦကြီးတဆောင်ကို ဆောက်လုပ်ဖို့
လည်း စီစဉ်နေကြတယ်။ ဒီလို သာသနာပြု လုပ်ငန်းတွေကို အကောင် အထည် ဖော်နိုင်တာဟာ ဒကာ ဒကာမတွေက စေ
တနာ ထက်ထက် သန်သန်နဲ့ လှူကြလို့၊ ဆရာတော် သံဃာတော် တွေရဲ့ ဦးဆောင်မှုကို ရယူပြီး အမှုဆောင်အဖွဲ့, ဝေယျာ
ဝစ္စအဖွဲ့နဲ့ အသင်းသူအသင်းသား အားလုံးတို့က ကြိုးပမ်းကြလို့ပေါ့ ဒကာလေးရ။
မှန်လှပါ အရှင်ဘုရား၊ ကြားရတာ ဝမ်းသာလှပါတယ်။ ကထိန်အကြောင်းလဲ အတော်အသင့် နားလည်သွားပါပြီ။
သာဓု .. သာဓု .. သာဓုပါ ဘုရား။
မူကြိုဆရာ မှ ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မူရင်းလင့် = http://buddhismworld.ning.com/profiles/blog/show?id=6371237%3ABlogPost%3A442597&xgs=1&xg_source=msg_share_post
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, August 29, 20142comments:
ကဏ္ဍ ရိုးရာပွဲတော်များ, ဘာသာရေး, မြန်မာ့ပုံရိပ်များ
မဟာသင်္ကြန် အကြို့နေ့ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် မဏ္ဍပ် မြင်ကွင်း
၁၃၇၅ ခုနှစ် မဟာသင်္ကြန် အကြို့နေ့ ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝန် မဏ္ဍပ်မြင်ကွင်း
(ဓာတ်ပုံ – ဖိုးကျော်၊ ကျော်ဇေယျာဝင်း)
ကဏ္ဍ ရိုးရာပွဲတော်များ, ဓါတ်ပုံသတင်းများ